Qorshe Mareykanka la damacsan yahay Al-Shabaabka Kenya oo la dusiyey
Mareykanka oo raba in uu Kenya ka fuliyo duqen ka dhan ah Al-Shabaab
NAIROBI, Kenya – Mareykanka ayaa ka fekeraya in uu duqeymo cirka kula beegsado Al-Shabaab gudaha Kenya. Waaxda Difaaca iyo madaxweyne Donlad Trump waxay ansixinayaan go'aankan, sidda ay wararku xusayaan.
Wargeyska afka dheer ee New York Times ayaa saraakiil Ameerikaan ah kasoo xigtay in duqeymaha ay si gaar ah uga dhacayaan ismaamulada Lamu iyo Garissa, halkaasoo dagaalameyaasha Al-Shabaab ay joogitaan ku leeyihiin.
Sidda laga soo xigtay warbixinta, taliska Mareykanka ee qaarada Afrika ayaa fulinaya weeraradan dhanka hawada, iyadoo awoodooda la xadidayo.
Afhayeeno u hadlay AFRICOM iyo Wasaarada Gaashaandhiga Mareykanka oo xaqiijiyey qorshahaan ayaa ka gaabsaday in ay fahfaahin dheeriya bixiyaan.
"Mareykanka wuxuu mar walba doonayaan in uu ilaaliyo badqabka muwaadiniintiisa iyo ciidamadiisa ka jooga Kenya," ayuu yiri afhayeenka Wasaarada kaasoo ku daray "wax walba waanu u qaadeynaa arrintaas".
Safaarada Mareykanka ee Nairobi iyo dowladda Kenya ayaanan ka jawaabin codsiyo loo diray kuna saabsanaa in ay tafaasiil ka bixiyaan hindisahaan.
Washington ayaa haatan Al-Shabaab ku beegsata gudaha Soomaaliya, halkaasoo diyaaradaha ku duqeeya maleyshiyada kasoo duulaan Kenya iyo Jabuuti.
Qorshahaan cusub ayaa la aaminsan yahay in uu cadaadiska ku kordhinayo Al-Shabaab kuwaasoo muddooyinkii dambe xoojiyey beegsiga saldhigyada Ameerikaanka ee labada dal dil iyo dhaawacna ugu geysteen askar Mareykan ah.
Mas'uuliyiin "ka tirsan" dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa farta ku fiiqay howlahaas.
Al-Shabaabkii weeraray xerada Manda Bay oo la aqoonsaday
Afrika 20.08.2020. 16:35
Mareykanka oo ka hadlay weerarka Al-Shabaab ee saldhiga Kenya
Afrika 05.01.2020. 11:42
Kenya oo war kasoo saartey weerarka Saldhig ciidamada Mareykanka
Afrika 05.01.2020. 09:58
Kenya oo amar kusoo rogtay Basaska kadib weerarkii Al-Shabaab
Afrika 18.12.2019. 22:12
Dacwad urur u dooda Muslimiinta ka gudbiyey Kenya oo xukun lagu riday
Afrika 30.11.2019. 12:05
Duqeyn ka dhacdey fariisinka ugu weyn Al-Shabaab oo laga warbixiyey
Soomaliya 29.07.2020. 21:00